Nampirafy izy, mbola azo itokisana ve?
Mpivady na mpifankatia mielanelan-taona be, tokony ho olana ve ?
Hafahafa ny fijerin'ny olona ny mpifankatia na mpivady misy elanelan-taona be. Ary mety lasa izany aza no sakana ho an'ny mpifankatia sasany. Fa tena tokony ho olana tokoa ve anefa?
Tsy miresaka amiko intsony izy, fa maninona?
Fanontaniana matetika mipetraka amin’ny vehivavy manana olon-tiana ity ezahina ho valiana androany ity. Misy fotoana ny olon-tiana no mangina tsy handrenesam-baovao tampoka. Inona tokoa no anton’izany?
Fomba roa hanalana ny hasarotam-piaro
Misy akony ratsy ao anatin’ny fiarahana ny hasaroram-piaro diso tafahoatra. Manimba izy sady mampijaly.
Nampirafy in-dray…mety mbola hamerina ve ?
Fanontaniana tena manitikitika ny olona efa nampirafesina ity entina aminao androany ity. Misy tokoa ve ny olona nateraka hampirafy? Raha nampirafy indray mandeha ve dia mety tsy ho afaka amin'izany intsony?
Ny fomba fitiavana tena maha-sambatra…
Maro ny vehivavy mahatsiaro mijaly ara-pitiavana. Anisan’ny mampijaly azy ireo indrindra ny tsy firarahiana sy ny hasarotam-piaro. Mety avy amin’ny fanavahana ireo fihetseham-po roa ireo koa anefa no ahafahana mitady vahaolana amin’izany.
Mahatratra ny vady nampirafy, ny tsy tokony atao !
Mampirafy ny olon-tianao, na ny vadinao. Rehefa tratranao izy, dia manazava, miangavy, mifona, mandamin-dresaka.
Hadisoana telo tsy mahasambatra ny mpivady
Amin’izao vanim-potoana izao indrindra no tsara hanaovana jery todika hanatsara ireo lesoka hita ao anatin’ny fiainan-tokantrano. Misy santionany telo matetika fanao ireto tokony hahitsy :
Marary ny ampirafesina. Ankoatra ny alahelo sy ny hatezerana dia tsy maintsy mipetraka koa ny fanontaniana ny amin'ny tokony atao.
Mbola hijanona aminy ihany ve sa hisaraka ? Dia hatao ahoana ny ankizy ? Raha hijanona aminy ihany dia mbola hahavita hatoky azy ve? Ary mbola ho azo atokisana ve izy? Ahoana ny ahafantarana
Mandinika aloha : Raha mbola ao anatin'ny hafanam-po entin'ny hatezerana sy ny alahelo lalina dia aza manapakevitra mihitsy aloha, aza manaiky hiresaka aminy akory. Ny mety indrindra aza dia ny misintona mba ahafahana mampitony fo. Tsy hitondra mankaiza mihitsy ny resaka atao ao anaty hatezerana. Mandritra izany koa dia afaka mandinika ny antony mety nahatonga azy namitaka anao ianao. Jereo ny fomba fifandraisanareo tao ao. Tsy azo ekena mihitsy ny nataony na inona na inona antony. Fa diniho koa anefa sao misy anjara andraikitrao ihany. Sao dia tsy nanam-potoana ho azy ianao, sao dia nisy nahavariana anao ka tsy nataonareo laharam-pahamehana ny fiarahanareo ohatra... Mandritra izany koa no hamantaranao hoe mbola te hanohy ianao sa tsia.
Ny fanontaniana apetraka aminy : Rehefa hitanao fa tony kokoa ianao vao maneke hiresaka aminy. Ny tanjon'io resaka io tsy fitsarana azy intsony satria efa fantatra fa diso izy. Ny tanjona dia izahana ny fototry ny olana mba ahafahana mijery raha mbola misy vahaolana na tsia. Hanontanio azy ny antony nahatonga azy nijery tany an-kafa. Tsindrio tsara aminy fa ilay tena antony no tadiavinao fa tsy fanadiovan-tena ohatra. Hanontanio izy raha noho ny zavatra nataonao no nahatonga izany. Sao dia rendrarendra fotsiny koa no nahasolafaka azy. Asaivo lazainy anao ny zavatra nandrasany taminao tsy fenonao. Hanontanio azy koa ny fihetseham-pony ho an'ilay olona namitahany anao fa indrindra ny tiany atao satria tsy azo ekena velively ny manan-droa.
Miankina amin'izay valin-teniny : Arakaraka izay valin-teny omeny anao eo no hahafantaranao na mbola afaka ny hatoky azy ianao na tsia. Tsy ilay zavatra teneniny fotsiny anefa no jerena sy raisina fa ny fomba filazany, ny fihetsiny... Raha tony tsara ianareo no niresaka dia tsy maintsy ho tsinjonao ao anatin'ny fomba firesany raha manenina tamin'ny nataony tokoa izy na tsia. Raha manapakevitra ianao fa hiala nenina aminy dia aza adinoina ny mametraka ireo fepetra rehetra takianao tsy iverenan'ny toy izany intsony.